ALUET waa nooc cusub oo QARSAN. Tilmaamaha iyo Faa'iidooyinka - Magazine Nidaamka Baradhada
Bogga guriga Injineerinka / Teknolojiyada
ALUET waa nooc cusub oo QARSAN. Tilmaamaha iyo Faa'iidooyinka
Shirkadda "AGRICO" (Nederland) waxay si nidaamsan u sameysaa shaqo xulasho muddada-dheer ah si loo helo noocyo leh waxsoosaar sare, soo bandhigid soo jiidasho leh, astaamo tayo iyo dhadhan leh oo la siiyay, iska caabin sare oo cuduro kala duwan ah. Feejignaan gaar ah ayaa la siiyaa horumarinta noocyo u adkaysta nabarrada goor dambe. Natiijada hawshani waxay ahayd abuuritaanka khadad noocyo ah oo ku midoobay kooxda “JIILKA CUSUB "(NEW JIILKA) oo leh iska caabin sare oo ku timaadda duqeynta goor dambe (9 dhibic 9 ka mid ah XNUMXka suurtagal u ah iska caabinta digriiga), oo u oggolaaneysa in la beero iyadoo aan loo isticmaalin sunta cayayaanka nidaamka beerashada dabiiciga ah.
Mid ka mid ah noocyadan, ALUET, ayaa hadda wakiil uga ah suuqa Ruushka.
Kala duwanaanta ALUET ee ka socota kooxda bilowga hore (75-85 maalmood ama 6,5 dhibic 9 ka mid ah), tuubbo cas. Waxaa ku jira Diiwaanka Ruushka ee 2018.
Caabbinta noocyada kala duwan ee ALUET ee goor dambe ayaa lagu xaqiijiyay baaritaanno ay sameeyeen dhammaan mac-hadka cilmi-baarista ee Ruushka ee loo yaqaan 'Phytopathology' (VNIIF) sanadkii 2017-kii oo ku saabsanaa goobta tijaabada ee Ramenskaya Gorka (joornaalka "Difaaca baradhada" Maya. 1, 2018, qodobka "Qiimaynta iska caabinta noocyada kala duwan ee ALUET ee goor dambe soo gaadhay"). Cadaadiska ALUETA ​​waxaa lagu qiyaasey 9 dhibcood oo ka mid ah 9ka suurtagal ee dusha sare (qiimeynta berrinka) - heerka tixraaca kala duwan Sapro Mira.
Goobta Lambarka VNIIF Title Heerka kore ee caabbinta (ku qiyaaso Heerka dusha sare ee iska caabinta (habka cad) Heerka iska caabinta Tuber
Dhibco Heerka Dhibco Heerka Dhibco Heerka
4 Wehel 7 Uu 6 Uu 6 Uu
ALUET waa noocyo badan oo kala duwan: waxaa loo isticmaali karaa suuqyada dabiiciga ah iyo kuwa dhaqameed (dhaqida, baakadaha), waxay ku habboon tahay sameynta shiilannada Faransiiska ee guriga; oo lagu gartaa maaddo qallalan oo heer sare ah (21%).
Awoodda sare ee noocyada kala duwan ayaa si buuxda loo ogaaday, iyada oo ku xiran talooyinka asalka. Beerista, carrada khafiifka ah ilaa dhexdhexaad waa la door bidaa, waxay ka jawaab celiyaan waraabinta joogtada ah iyo bacriminta nitrogen.
Guga / diirimaadka
- Waxaa lagugula talinayaa inaad horey u soo baabiso digriiga ka dib markaad jabiso caleemaha suufka ah; xaaladaha kale, biqilka hordhaca ah looma baahna - waa ku filan tahay in digriiga loo maro kuleylka heerkulka ka hor inta aan la beerin; jebinta laamaha dhinaca in ka badan hal jeer waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saar.
- Laguma talin inaad ku beerto carro qabow (t ka yar + 10 ° С).
Fogaanta udhaxeysa digriiga marka la beero ujeedooyin miis (kala dheereyn 75 cm):
jajabka walxaha abuur 35/55 - qiyaastii 27 cm (50 digrii / ha).
Fogaanta udhaxeysa digriiga marka la beero bartilmaameedka abuurka (kala dheereynta safka 75 cm):
jajabka walxaha abuur 35/55 - qiyaastii 22 cm (60 digrii / ha).
Horumarinta dhirta ugu wanaagsan, carrada waa inay lahaato fosfooras, potassium iyo nitrogen ku filan.
Falanqaynta nuxurka fosfooraska iyo potassium waa in lagu sameeyaa xilli ciyaareedkii hore, iyadoo laga soo qaadanayo carrada lakabka la beeri karo (20-25 cm); go'aaminta jiritaanka nitrogen - guga, ka hor intaan la beerin.
Fosfoor - qiyaaso caadi ah
Haddii fosfooraska ku jira ciidda uu yahay mid caadi ah (25-40 mg / kg oo ciid ah), qiyaasta dalabka waxaa lagu xisaabinayaa iyadoo lagu saleynayo 120-180 kg oo ah maado firfircoon halkii hektar.
Haddii fosfooraska uu ka hooseeyo qiimaha la oggol yahay, markaa waa in la kordhiyaa heerka dalabka. Haddii waxa ku jira ay ka sareeyaan, markaa sicirka dalabka waa la dhimayaa (illaa heer ugu yaraan 100 kg a.i.). Warshadda baradhada ayaa si dhib leh u nuugaysa fosfooraska ciidda, sidaas darteed waa in la qiyaasi karaa waxyaabaha ku jira cunsurkan. Marka maadada fosfooraska ay ka hooseyso 25 mg / kg ee carrada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro ilaa 250 kg oo fosfooraska sida ku xusan d.v. Haddii carradu ay culustahay qaabkeeda, fosfooraska waa in la adeegsadaa xilliga dayrta. Haddii carradu fududahay oo xaaqitaanka la qorsheynayo guga, markaa dalabka fosfooraska waa in la fuliyaa ka hor inta aan la faarin.
Kaliumpermanganat - hordhaca qiyaasta kordhay (+ 20% marka la barbardhigo noocyada kale)
Haddii macdanta potassium ee ciidda ku jirta ay tahay mid lagu qanco, markaa sicirka codsashada potassium ee baradhada abuurka ah wuxuu ku saabsan yahay 240 kg ai. (caadi 200 kg), baradhada miiska - 360 kg d.v. (caadi 300 kg). On carrada culus, Bacriminta potash lagu saleyn karaa dayrta. Markaad codsanayso potassium xilliga guga, ka hor intaan la beerin, waxaa lagama maarmaan ah in laga warqabo in Bacriminta boorashka ay ku jiraan koloriinku waxyeello u geysan karto baradhada.
Nitrogen - adeegsiga qaddar kordhay (+ 10% marka la barbar dhigo noocyo kale)
Ujeeddooyinka abuurka –130 kg maalintii. (caadiyan 120 kg a.i.).
Ujeeddooyinka cuntada - 160 kg d.v. (caadi ahaan 145 kg a.i.).
Waqtiga ugu fiican ee lagu codsado nitrogen waa ka hor intaan la beerin ama ka dib markii la beero iyo ka hor fuulitaanka oo dhameystiran. Maaddaama nidaamka xididdada baradhada uu si liidata u horumarsan yahay, qaadashada hal mar oo qaadasho badan oo nitrogen ah ayaa dhaawici karta geedka. Markaad codsanaysid qadar sare oo nitrogen ah, waxaa fiican inaad u qaybiso nidaamka laba qaybood: 65% ee caadada - marka la beero, iyo inta kale - saddex toddobaad ka dib biqilka.
Sababaha sababta iniinyaha baradhada ay ugu baahan yihiin nitrogen yar:
- maaddada nitrogen ee hooseysa waxay dedejisaa sameynta digriiga;
- maaddada nitrogen ee hooseysa waxay dardar gelineysaa xilliga sii kordhaya ee geedka, taas oo yareyneysa halista cudurrada fayraska ee lagu kala qaado aphids: marka ugu sarreysa ee guuritaanka aphid, caleemaha baradhada ayaa noqda kuwo aan macno lahayn, taas oo ah, in yar oo soo jiidasho leh cayayaanka;
- maadada nitrogen ka hooseysa waxay gacan ka geysaneysaa waxqabadka nadiifinta oo wanaagsan.
Qiyaasta dheelitirka nafaqada macdanta (gaar ahaan nitrogen) waxay gacan ka geysataa:
- yareynta halista koritaanka xad dhaafka ah ee dusha sare;
- sameynta tiro badan oo digriiga ah;
- horumarinta waqtiga ee dhirta iyo koriinkedu digriiga oo leh maqaar cufan, oo ku habboon goosashada makaanikada;
- yareynta halista waxyeello u geysato digriiga ku dhaca caabuqyada ciidda (fusarium, phomosis, jilicsanaanta jilicsan, pithium) iyada oo loo marayo dhaawac soo gaara diirka sababo la xiriira biseylkiisa inta lagu guda jiro goynta farsamada;
- yareynta qasaaraha keydka.
Iska caabinta Metribuzin
Noocyada ayaa si dhexdhexaad ah ugu adkaysta metribuzin (6 ka mid ah 9); isticmaalkeedu wuxuu u horseedi karaa midabbada kore ee dusha sare, laakiin iyadoon hoos loo dhigin dhalidda.
Baradhada ALUET waxay samaysaa dusha sare oo cufan oo xoog leh oo sii jiri kara illaa dhammaadka xilliga sii kordhaya; iyadoo la tixgelinayo iska caabinta duufaanka soo daahay, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho laba illaa seddex daaweyn oo kahortag ah oo loo yaqaan 'Alternaria' qeybta labaad ee xilliga koriinka, laga bilaabo xilliga digriiga la dhigo.
Waxay qaadan kartaa qiyaastii 3 toddobaad kadib markii caleenta la nadiifiyey (la gooyey) si loo sameeyo diir ku filan goosashada makaanikada; si looga fogaado horumarinta bololka nabarka biyo leh (pithium), fusarium, qurminta jilicsan, laguma talinayo in lagu soo goosto heerkulka saxarka tuber ee ka sarreeya 21 °; Khatarta cudurada aan kor ku soo xusnay sidoo kale way sii kordheysaa marka la goosanayo xaaladaha qalalan ee carrada culus oo leh carro badan oo carro ah.
Ku habboon kaydinta muddada-dhexe heerkulka + 5 ° С; haddii ay dhacdo in la kaydiyo dalagyada iyada oo ujeedadu tahay sii shaqaynta warshadaha, heerkulka kaydintu kama hooseeyo +7 ° С; si loo hubiyo tayada ilaalinteeda la doonayo, hoos u dhac heer kulka isbarbardhiga ah ee heerka muddada ugu weyn ee kaydinta ayaa lagula talinayaa marka la barbar dhigo noocyada kale.
Sifooyinka isbarbardhiga ee noocyada ALUET oo leh noocyo hore oo bislaada EVOLUSHEN
Goosashada noocyo kala duwan Evolution
Khadadka noocyada shirkadda "AGRICO" ee kooxda xilli hore iyo badhtamihii oo leh midab casaan diirka ah, oo lagu soo bandhigay suuqa Ruushka, waxaa jira laba nooc: hore-bislaada EVOLUSHEN iyo bartamihii-hore ALUET. Noocyadu aad ayey isugu egyihiin muuqaal ahaan, laakiin waxay si muuqata ugu kala duwan yihiin tikniyoolajiyadda beerashada.
Jiritaanka labada nooc ee dhirtu waxay u saamaxdaa soosaaraha inuu helo goosashada digriiga soo jiidashada leh ee cas-cas oo leh qiime sare oo suuq-geyn ah (80-90%), sababtuna ay tahay suuxdinta hore ee dusha sare ee noocyada kala duwan ee 'EVOLUSHEN' iyo ka dib (marka loo barbardhigo noocyada kala duwan ee 'EVOLUSHEN') ee noocyada ALUET.
- Caleenta noocyada kala duwan ee 'EVOLUSHEN' ayaa sii jiri kara illaa dhammaadka xilliga sii kordhaya, taas oo inta badan keenta xaqiiqda ah in digriiga uu ka weynaado cabirka la iibsan karo (sida caadiga ah, jajabka 60/70 mm) dhowr maalmood. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid suuxdin marka ku dhowaad 70% ee digriiga ay gaaraan 55 mm cabir ahaan: sidaas darteed, goosashada, tilmaameha suuqgeyntu waxay noqon doontaa qiyaastii 80-85%, iyo joogitaanka digriiga leh calaamadaha soo bixitaanka ayaa yaraan doona
- Abuuritaanka digriiga ku jira noocyada kala duwan ee 'ALUET' waxay dhacdaa dhamaadka xilliga sii kordhaya, digriiga guud ahaan wuxuu gaaraa qayb ka mid ah 55/70 mm, sidaa darteed, sicir-goynta marxaladda dambe waxay gacan ka geysaneysaa soo saar badan iyo kordhinta suuq-geynta digriiga.
Guud (9 max, 1 daqiiqo)
Bisayl hore 7 (70-80 maalmood) 6,5 (75-85 maalmood)
Cabirka tuber 8 7
Arrin qallalan 19 21
Miisaanka biyaha hoostooda 340 385
Qoto dheer indhaha 7 7
Wax soo saar 7 7
Iska caabinta cudurada
Fayraska Yn 6 9
Fayraska Yntn 7 7
duqayn dambe oo caleenta ah 5 8
duqayn dambe ee digriiga 6 9
biqilka / kululaynta naxdinta kuleylka kahor degitaanka
heerka degitaanka (ujeedooyinka cuntada) 50 kun (3,75 kumbiyuutar / m) 50 kun (3,75 kumbiyuutar / m)
Heerka abuurka (bartilmaameedka abuurka) 60 kun (4,5 kumbiyuutar / m) 60 kun (4,5 kumbiyuutar / m)
Bacriminta N -10%, P-std, K + 20% N + 10%, P-std, K + 20%
samaysashada maqaarka 3 ee toddobaadka 3 ee toddobaadka
kale jebinta caleemaha in ka badan 2 jeer waxay u horseedi kartaa laamo aan sinnayn
Waa in la ogaadaa in labada ALUET iyo EVOLUSHEN ay qaadanayaan qiyaastii seddex isbuuc si ay u sameeyaan diir u adkaysta goosashada farsamada.
Sidaad ogtahay, xulasho karti leh oo noocyo baradho ah iyo tayada iniinyaha ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee guusha guusha baradhada inteeda badani ku tiirsan tahay. "AGRICO EURASIA", oo ah wakiilka shirkadda "AGRICO" ee ku sugan dhulka Xiriirka Ruushka, Kazakhstan iyo Belarus, waxay si isdaba joog ah suuqa u siineysay guulaha ugu wanaagsan ee taranka baradhada Yurub in ka badan 20 sano. Nooc ballaaran (oo ah 40 noocyo casri ah oo wax soo saar aad u sarreeya) ayaa u oggolaanaya iibsade kasta inuu helo nooc u gaar ah oo buuxiya shuruudaha lagama maarmaanka ah.
Waxyaabaha abuurka waxaa loo soo saaray si adag u hoggaansanaanta tikniyoolajiyada beerashada iyo ka ilaalinta cudurada iyo cayayaanka, taas oo hubineysa in tayada alaabtu ay buuxineyso shuruudaha GOST.
Shirkaddu waxay siisaa shuruudo ku habboon iskaashiga shirkadaha beeraha heer kasta oo ay yihiin.
Tags: "AGRICO"ALUETcaabbinta sare ee engeeg goor dambedhexdhexaad noocyo baradho
ShareShare95Share69Si aad u soo diri
Wax soo saarka beeraha ayaa kor u kacay qiimihiisu, wax soo saarkuna hoos buu u dhacay Lithuania
Baradho abuur ah oo ka socda LLC MAG. Xoog saarida noocyada hore